करोड घुस खाएर २० बर्षदेखि फरार अधिकृत डाक्टरलाई पढाइरहेको बिरामी जाँचिरहेको भेटिएपछि ! – Khabaarpati
November 13, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on करोड घुस खाएर २० बर्षदेखि फरार अधिकृत डाक्टरलाई पढाइरहेको बिरामी जाँचिरहेको भेटिएपछि !
काठमाडौ । कानून छ तर कानून कार्यन्वयन पाटो अत्यन्तै फितलो छ भने त्यो देशका नागरिकमा डर हुन्न । जब डर हुन्न उनीहरु जेपनि गर्न तयार हुन्छन् । घटना खुल्दा सबैको होस उडाउने खालको बन्छ । नेपाल लगायत छिमेकी मुलुक भारतमा प्राय यस्तै घटना हुने गर्दछन् ।
आज हामी एउटा यस्तो घटना सार्वजनिक गर्दैछौ थाहा पाउँदा तपाई स्वयं चकित हुनुहुनेछ । करोड भन्दा बढी घुस खाएर २० बर्षदेखि फरार अधिकृतलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको थिएन । त्यही त हो माथी उल्लेख गरेजस्तै लोभ र मोहमा फसेर थाहा पाएपनि चुपचाप बसेकै कारण उनी फेला नपरेका हुन् ।
तर उनी २० बर्षपछि जस्तो अवस्थामा फेला परे फेरी सबै चकित बने । घुस खाएर हराएका उक्त भन्सार अधिकृत फेरी सबै नक्कली कागजात पेस गरेर मेडिकल कलेजको प्रोफेशर बने । जब की उक्त विषय नै नपढेका ति व्यक्तिले एमडी (मेडिकल साइन्समा मास्टर डिग्री) हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली नागरिकता देखि सबै कागजात नक्कली बनाएर मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस (डाक्टर) लाई पढाइरहेको भेटिए । त्योपनि आज भोली मात्र हैन उनी २० बर्षदेखि पढाइरहेको रिटार्यड भइसकेका प्रोफेशर बन्दै थिए ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
पढ्दै जानुहोस् कहानी फिल्मीको भन्दा कम छैन । उनी सरकारलाई करोडौ चूना लगाएर फरार व्यक्ति थिए । सीमा शुल्क विभाग अर्थात भन्सारमा सरकारी जागिरे थिए । उनी अधिकृतको जिम्मेवारीमा पुग्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौ कुम्ल्याए । मुद्धा अख्तियारमा पुग्यो । उनी एकाएक फरार भए ।
उनलाई सीबीआईले पछिल्लो २० सालदेखि खोजिरहेको थियो । तर उनी त एक मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पढाइरहेको भेटिए । त्योपनि फर्जी डिग्री देखाएर प्रोफेसरमा जागिर खाए । मेडिकल विद्यार्थीलाई पढाए । अब उनले पढाएका विद्यार्थी कस्ता भए होला ।
भ्रष्टाचार मुद्धामा फसेका यी व्यक्ति पूर्व सीमाशुल्क मूल्यांकन अधिकृत थिए । उनी भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको एक निजी मेडिकल कलेजमा फर्जी डिग्री देखाएर इन्टरनेशनल मेडिसिनका प्रोफेसर बनेका भेटिए । अधिकारीहरुले शुक्रवार यो जानकारी दिएका छन् ।
उनले फर्जी कागज अभिनव सिंहको नाममा बनाए । बास्तविक नाम राजीव गुप्ता थियो । यी सबै कागज कसरी बनाए अहिले प्रहरीको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । २० बर्ष अघि नक्कली कागज बनाउन को–को संलग्न थिए अहिले प्रहरीले सबैलाई खोजिरहेको छ । उनी अकबरपुर, मथुराको के के डी मेडिकल कलेज अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्रमा एसोसिएट प्रोफेसरको रुपमा पढाइरहेको अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
अब पढाउने प्रोफेसरले अस्पतालमा चै काम गरेनन् होला ? सजिलै अनुमान गर्नुहोस् की उनी त्यहाँका चर्चित चिकित्सकको रुपमा उपचारपनि गरिरहेका थिए । प्रोफेसर डाक्टर अभिनव सिंह त्यहाँको चर्चित नाम हो । जब पक्राउपछि प्रहरीले नाम र व्यक्ति सार्वजनिक गर्यो त्यहाँका स्थानीय चकित बनेका छन् ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अस्पतालका एक अधिकारीले नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा भने उनी एमबीबीएस विद्यार्थीलाई इन्टरनल मेडिसिन विषय पढाउने गर्दथे । एक वरिष्ठ अधिकारीले भने सिंहलाई पक्राउपछि खुलेको रहस्यले विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तर र आमा नागरिकको स्वास्थ्यको गणस्तरलाई गिज्याएको छ ।
यो व्यक्ति उही हो जो मुम्बईमा सीमाशुल्क मूल्याकंन अधिकृत रहेर करोडौ घोटला गरेर फरार भएको अभिनव सिंह हो । यसले कथित रूपमा फर्जी डीईपीबी (ड्यूटी एण्टाइटेलमेण्ट पास बुक) पावती पत्रको पुष्टि गरेर सीमा शुल्क विभागको चार करोड रुपैयाँ आफ्नो बनाएको थियो । २९ सेप्टेम्बर सन् १९९९ मा सीबीआईद्वारा यसलाई फरार सूचीमा राखेर खोजिरहेको थियो ।
अधिकारीका अनुसार यो व्यक्तिमाथी छुट्टै पाँच लाख रुपैयाँ नागरिकबाट घुस लिएको र राज्यको मारुति जेन कार लिएर फरार रहेको आरोपपनि छ । अझ चकित हुने कुरा त के छ भने अधिकृत बनेपछि राज्यले दिएको कार लिएर नै उनी फरार भएका थिए ।
त्यो कार अहिलेसम्मपनि उनीसँगै रहेको देखिएको छ । उसले नम्बर परिवर्तन गरेर नयाँ नयाँ इन्जिन र पार्टस राख्दै त्यही कार चलाइरहेको भेटिएको छ । अभिनवलाई अहिले प्रहरीले मुम्बई लिएर गएको छ । उसलाई सीबीआई अधिकारीले अरु के कति बदमासी गरेको छ भन्ने बारेमा अनुशन्धान गरिरहेको छ ।
दैनिक बयान लिइरहेको छ । गोप्य सूत्रका अनुसार उनी भारतको झाँसी निवासी हुन् । झनै चकित हुने कुरा त के छ भने उनले उक्त कलेजमा मात्र हैन फरीदाबाद र अन्य शहरका कयौँ मेडिकल कलेज भिजिटर प्रोफेसरका रुपमा पढाएका छन् ।
कयौँ मेडिकल अस्पतालमा मोटो रकम लिएर बिरामीको उपचार गरिरहेको अनुशन्धानका क्रममा खुलेको छ । नेपालका अस्पताललाई विश्वास नगरी भारतका अस्पतालमा दौडिने नेपाली धनाड्य र भारतमा मेडिकल कलेजमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले यो खबर थाहा पाउँन जरुरी छ । सचेत रहनुहोस् नत्र तपाईहरुपनि फर्जी व्यक्तिबाट फस्नुहोला । सचेतनाका लागि सक्दो सेयर गरौँ ।’**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **